Tafaariiqleyda Ka Digtoonow: Isbedelada Iibsiga ee Internetka Way Dardar Gelinayaan | Martech Zone
Tafaariiqleyda Ka Digtoonow: Isbedelada Iibsiga ee Online-ka Way Dardar Gelinayaan
Talaado, September 23, 2014 Douglas Karr
Dadbadan baa u guuritaanka magaalooyinka halkaas oo isla maalin gaarsiinta suurtagal maahan oo keliya, laakiin durba wuxuu ku yaal magaalooyin badan oo ku yaal Mareykanka.
Qeexitaannada Dijital ee Dijital ah:
Qasabinta webka - marka macaamilku u safro dukaan si uu wax u iibsado ka dib markii uu ku baaro badeecada khadka tooska ah.
Qolka jiifka - marka macaamilku wax ka iibsado khadka tooska ah ka dib markii uu baaray sheyga dukaanka ku jira.
Kobaca qarxa ee ganacsiga mobilada ayaa dukaanka u keenaya macaamiisha halkii laga keeni lahaa ku hogaaminaya macaamilka dukaanka. Taasi waxay beddeleysaa muuqaalka dukaamada tafaariiqda waaweyn hadda looma baahna, meeshii qol yar oo bandhig ah kuwaas oo ah shaqsiyaad badan oo leh bandhigyo qoto dheer iyo kaalmada wax soo saarka. Uma baahni inaan la istaago taleefan ama aan ka walwalo badeecad soo baxday.
Sidoo kale, waxay bedeshaa muuqaalka guusha ee dukaamo tafaariiqle kasta. Dukaamada tooska ah maahan inay la tartamaan dukaamada jireed ee u dhow, waa inay la tartamaan dukaan kasta oo internetka ah oo laga yaabo inay leeyihiin qiimo aad u sarreeya, maraakiibta bilaashka ah, bixinta degdegga ah, siyaasadaha soo noqoshada ama adeegga macaamiisha ee weyn. Taasi waxay ka dhigan tahay maalgashi weyn oo xagga teknolojiyadda ah halkii laga sii wadi lahaa maalgelinta leben iyo hoobiye.
Iibsashada alaabada khadka tooska ah waa dhacdo ugub ku ah dukaamada tafaariiqda adduunka waana mid ka mid ah kanaalada wali isku dayaya inay la qabsadaan. Tafaariiqleyda qaarkood waxay doorteen inay internetka galaan si ay u ceyrsadaan dhinaca ganacsiga ee ganacsiga halka tafaariiqleyda qaar ay runta ku dhaqmaan xulashada dukaanka tafaariiqda jirka. Dabcan, tafaariiqleyda qaarkood waxay koobeen labada waddo ee u horseedi kara koritaan cajiib ah.
Infographic-kaani wuxuu sahamiyaa dhammaan aagga tafaariiqda khadka tooska ah wuxuuna diiradda saaraa kobaca adduunka oo dhan. Wax ka iibsiga khadka tooska ah waa arrin aad u weyn oo loogu talagalay kuwa tafaariiqleyda dhaqameed ee go'aansaday in aysan ka dhaqaaqin khadka tooska ah maaddaama ay macaamiisha la macaamilaan bandhigida (daalacanaya alaabtooda instore) laakiin dhab ahaan ma iibsadaan ilaa ay ka galaan internetka.
Infograafigani ka yimid SnapParcel sidoo kale daraasad ku sameeya isbeddellada mustaqbalka ee tafaariiqda internetka ee adduunka oo dhan.
SnapParcel waxay bixisaa adeegyo gaarsiinta Ireland ilaa Kanada, USA iyo Australia.
Tags: ecommercemaraakiibta freedukaanka internetkatirakoobka wax iibsiga ee internetkaistaatistikada internetkatafaariiqdaisla maalin gaarsiintabandhigidaxijaabwebrooming
Sheekada Shirkaddaadu Miyay Leedahay 5-tan Muhiim?
Haddii aad ku jirto Iibinta ama Suuqgeynta, U Hel Hada Nafaqo!
Mar 13, 2015 at 3: 24 AM
Waad ku mahadsantahay wadaagida macluumaad aad u xiisa badan oo ku saabsan Tafaariiqleyda Iska jir: Isbeddelada Wax Iibsiga ee Internetka Way Dardar Gelinayaan. Tani waa macluumaad aad u faa'iido badan akhristayaasha dib u eegista barta internetka. Ku sii wad sidan dhajinta fiican sidan.
- Aneesh Paranjay,